Ethiopian Airlines voarohirohy ho fanaterana fitaovam-piadiana tsy ara-dalàna tany Eritrea
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Ethiopian Airlines voarohirohy ho fanaterana fitaovam-piadiana tsy ara-dalàna tany Eritrea
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Crime • Vaovao farany Eritrea • Vaovao farany momba an'i Ethiopia • Vaovaom-panjakana • Vaovao • People • Safety • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Ethiopian Airlines voarohirohy ho nitatitra fitaovam-piadiana tsy ara-dalàna tany Eritrea
Raha marina izany dia fanitsakitsahana ny lalànan'ny fiaramanidina iraisam-pirenena ny fanambarana, izay mandrara ny fampiasana fiaramanidina sivily hitaterana fitaovam-piadiana ara-tafika.
Ny fanadihadiana nataon'ny CNN dia nilaza fa nampiasa ny fiaramanidina hitondrana fitaovam-piadiana ho any Eritrea ny fiaramanidina Ethiopian Airlines.
Raha marina izany dia mety hanohintohina ny maha-mpikambana ny Ethiopian Airlines ao amin'ny Star Alliance manana tombony.
Nilaza ny Ethiopian Airlines fa "manara-dalàna tanteraka amin'ny lalàna mifehy ny sidina nasionaly, isam-paritra ary iraisam-pirenena".
Voampanga tamin'ny tatitra fanadihadiana vaovao nataon'ny CNN momba ny fitondrana fitaovam-piadiana tsy ara-dalàna avy any Etiopia nankany Eritrea nandritra ny ady an-trano nihosin-dra tao Tigray.
Ny fanadihadiana nataon'ny CNN dia nanonona ny “antontan-taratasy sy fampisehoana entana”, ary ny “kaonty nanatri-maso sy ny porofo an-tsary” izay nanamarina fa nitondra fitaovam-piadiana ireo Ethiopian Airlines fiaramanidina eo anelanelan'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena any Addis Ababa sy seranam-piaramanidina Eritrea ao Asmara sy Massawa tamin'ny Novambra 2020.
Tamin'ny fandinihana ny lalana dia nanamarina ilay fampahalalam-baovao fa "in-enina farafahakeliny - hatramin'ny 9 Novambra ka hatramin'ny 28 Novambra - Ethiopian Airlines nandoa ny minisiteran'ny fiarovana an'i Etiopia an'arivony dolara ho an'ny entana miaramila halefa any Eritrea. ”
Air waybills, izay antontan-taratasy izay miaraka amin'ny entana alefan'ny iraka an'habakabaka iraisam-pirenena hanome vaovao amin'ny antsipiriany momba ny fandefasana ary hamela azy hanaraka, dia naneho fa ny fitaovam-pandefasana dia misy basy, bala, ary na dia fiara mifono vy manokana aza.
Ny fehezan-teny sy ny fanafohezana, ao anatin'izany ny "refill Militaire," "AM" ho an'ny bala sy ny "RIFFLES" (tsipelina diso fanoratana) dia nipoitra teny amin'ny làlana, araka ny fanadihadiana nataon'ny CNN, izay nanonona resadresaka nifanaovana tamin'ny mpiasan'ny kaompaniam-pitaterana izay nanamarina ireo fepetra ireo.
Ilay teo aloha Ethiopian Airlines Nilaza tamin'ny mpanao famotorana ny mpiasa entana:
“Pickup Toyota ny fiara izay mijoro ho an'ny sniper. Nahazo antso avy amin'ny talen'ny fitantanana tamin'ny alina be aho nampahafantatra ahy hitantana ny entana. Tonga tamin'ny 5 maraina ny miaramila mba hanomboka hamoaka kamio lehibe roa feno fitaovam-piadiana sy pickup. Tsy maintsy nijanona ny sidina nankany Bruxelles, a Boeing Fiaramanidina entana 777, izay feno voninkazo, avy eo namoaka ny antsasaky ny entana mora simba izahay mba hanomezana toerana ho an'ny fitaovam-piadiana. "
Nolavin'ny Ethiopian Airlines ilay tranga, tamin'ny filazany fa "manara-dalàna tanteraka amin'ny lalàna mifehy ny sidina nasionaly, isam-paritra ary iraisam-pirenena" ary "araka ny fahalalany sy ny rakitsorany dia tsy nitondra fitaovam-piadiana tamin'ny làlan'ny làlan-kalehany izy ireo. ny fiaramanidiny. ”
Ity fanambarana farany ity dia manamarika ny fiverenana iray hita avy amin'ny fanambarana nataon'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka taloha izay nandà izany fa tsy nitondra fitaovam-piadiana nandritra ny fifandonana.
Raha marina izany dia fanitsakitsahana ny lalànan'ny fiaramanidina iraisampirenena ny fanadihadiana, izay mandrara ny fampiasana fiaramanidina sivily hitaterana fitaovam-piadiana ara-tafika. Mety hanohintohina ny maha-mpikambana ny Ethiopian Airlines ao amin'ny Star Alliance, vondrona misy zotram-pitaterana an'habakabaka 26 manerantany.
Oktobra 8, 2021 ao amin'ny 12: 20
Tsy marina izany fa isika rehetra izao dia politika governemanta etiopianina ananany manana fiaramanidina miaramila izy ireo maninona no mampiasa kaompaniam-pitaterana an'habakabaka etiopianina izany no politika andramo zavatra hafa.